Wariye Bistoolad qaatey oo sheegay in uu shahiidayo oo nolol lagu qabtey (Video) – SBC
Wariye Bistoolad qaatey oo sheegay in uu shahiidayo oo nolol lagu qabtey (Video)
Posted by editor on August 25, 2011 Comments
Haweenay wariye Televison ah oo maalmo ka hor ka soo muuqatey TV-yada iyadoo bistoolad sidata, isla markaana suunka qasnadaha rasaasta lagu qaato uu u xiran yahay kuna dhaaranaysa inay dalkeeda u shahiidayso ayaa iyadoo nool gacanta lagu dhigay.
Hala Misrati oo war aqriye ka ah Telefishinka qaranka dalka Liibiya ee lagu magacaabao Jamahiriya channel oo si weyn u taageerayey hogaamiyaha Liibiya ee dagaalka lagu hayo ayaa hal mar Tv-ga ka soo muuqatey iyadoo bastoolad gacanta midig ku haysta isla markaana hanjabaad & qaylo isku daraysa isla markaana sheegaysa inay u dhimanayso difaaca Col. Qadaafi & Liibiya, waxaana ay sheegtey inay doonayso inay wax dhisho ama ay dhimato.
Hala Misrati ayaa tiri “Waxaad doonaysaan inaad aamusisaan Telefishinka Jamahiriya channel, qorigan aan haysto maanta waan ku dhimanayaa ama waxbaan ku laynayaa, waxaad doonaysaa inaad Chanalkan qaadataan, waxaan difaaci doonaa saaxiibadey, waana u dhimanayaa, waxaana diyaar u nahay inaan Shahiidiin noqono”.
48 saac ka dib markii Hala dhamaan xeerarkii saxaafada meel iska dhigtey isla markaana ay cadeysatey dagaal ayaa waxaa gudaha caasimada Tripoli soo galey xoogaga mucaaradka ee la dagaalamaya Col. Qadaafi waxaana ay gacanta ku dhigeen Hala.
Telefishinkii ay ka shaqeynaysayna wuxuu hawada ka baxay habeenimadii Isniinta ka dib markii ay xoogeysteen dagaalada ba’an ee ka aloosan caasimada Liibiya.
Hala Misrati xidig ayay ka aheyd Tv-ga Jamahiriya channel laakiin war aqirinteeda oo kaliya kuma soo jiidan indhaha caalamka waxay la soo shir tagtey indho adeyg iyo waji aan nixin bishii March ka dib markii warka Tv-ga iyadoo akhrinaysa ay si xun u aflagaadeysay gabar Iskooley aheyd oo lagu magacaabo Iman al-Obeidi oo sheegatey in ciidamada Col. Qadaafi ay kufsadeen.
Misrati ayaa war ka sameysay gabadhaasi waxaana ay ku tilmaamtey “Beenaaley, Jirkeed ka ganacsato, oohin iska soo daadinaysa, waxaana loo fasirtey hadalada Hala kuwa ay xabadka ugu dhigayso difaaca Col. Qadaafi waxaana xiligaasi wixii ka dambeeyey loo arki jirey ibtilo afkeeda ku difaacay taliska Qadaafi.
Video qosol & la yaab leh oo ku saabsan Hala oo si daran u dhaaranaysa link hoose ka daawo.